बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’ - Nepali Sandes
बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’
वनस्पति शास्त्रले यसलाई घाँसको प्रजातिमा गाभेको छ। तर स्वास्थ्यवर्धक घाँसहरूको चर्चा गर्ने हो भने बाँसलाई ‘घाँसको राजा’ भन्न सकिन्छ जुन नाम जापानीहरूले अगावै दिएका छन् ।
त्यस्तो राम्रो प्रोटिनको स्रोत भएको तामाले शरीरको प्रतिरोधक क्षमता पनि बढ़ाउँछ । तामामा भिटामिन बी6, भिटामिन ई र ए, नियासिन, रिबोफ्लाभिन, थियामिन र फोलेटहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी खनिज तत्त्वहरूमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिंक, सोडियम, फोस्फरस, पोटासियम, कप्पर, म्यागानिज र आइरन हुन्छ ।
यी भिटामिनहरू र मिनेरलहरूको उपस्थितिले यो सब्जीलाई हाम्रो इम्युन सिस्टम वा रोग प्रतिरोधक क्षमता अझ सशक्त तुल्याइदिने प्राकृतिक क्षमतावान बनाइदिएको छ । तामामा रहेको फाइटोस्टेरोल्सहरू जस्तै क्लोरोफिल, एमिलेज र फ्लोभिनहरूले शरीरमा क्यान्सर विकासलाई नष्ट गर्दछ अथवा हाम्रो शरीरमा सजिलै क्यान्सर रोगको विकास हुँदैहुँदैन ।
तामामा हुने एक प्रकारको तत्त्वले गर्भवती अवस्थाको अन्तिम महीनामा महिलालाई यथासमयमा प्रसवको निम्ति औषधिकै काम गर्छ। प्रसव समय लम्बिएर जाँदैन। तामाले यसबाहेक पिसाबघरका कतिपय समस्याहरू (पिसाबनली संकीर्ण भएको अथवा अति विस्तृत भएको अवस्थामा, स्त्री-पुरुष दुवैको) त्यसलाई सही बनाउन पनि औषधिको काम गर्छ
पाचन समस्यामा तामा उपयोगी खाद्य परिकार हो। तामाले आन्ध्राका कतिपय कीराहरू पनि मार्दछ र पेटको समस्या ठीक गर्छ। झाड़ा-पखला लाग्द र पेटमा ग्यास बढ़ेर पेट फुल्दा तामा अवश्यै खानुपर्छ।
यदि सबै गुणयुक्त कुनै पनि स्वस्थकर सब्जीको सिफारिस गर्ने हो भने तामा एक नम्बरमा आउने भयो। हामीले प्राचीन कालदेखि सब्जीको रूपमा खाँदै आएको यो तामा यति गुणकारी छ भन्ने कुरा हालै मात्र सार्वजनिक भयो र अहिले एसियालीमुलुक छोड़ेर पाश्‍चात्य मुलुकहरूमा पनि यो सब्जी लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यसको अमिल्याइएको अचारहरू भने सबैको निम्ति सही नजच्ने हुँदा सबैले यस्ता अचारको सेवन नगरेको राम्रो हुन्छ। हड्डी सम्बन्धी कतिपय रोगमा यो सब्जी गुणकारी हुँदैन, यद्यपि हड्डीको विकास तथा निर्माणमा तामामा हुने क्याल्सियमले सहयोग पुर्‍याउँछ।श्रोत स्वास्थ खबरपत्रीका
२०७५ आश्विन २०, शनिबार ०१:०५ गते मा प्रकाशित, 443 जनाले हेर्नुभयो
एक महिनाभित्रै विराटनगरमा रेल
नेकपामा वर्चस्वको लडाइँ